कमला शनिबारदेखि होटलमा बसेको रह’स्य खुल्यो, के हो त वास्तविकता ? (भिडियो हेर्नुस) – Dainik Sangalo
कमला शनिबारदेखि होटलमा बसेको रह’स्य खुल्यो, के हो त वास्तविकता ? (भिडियो हेर्नुस)
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २१, २०७८ समय: १५:३३:२८
पौष १२ गते जंग’लमा भेटिएकी खोटाङ घर भै उर्लाबारी बसेर पढ्दै आएकी कमला आचार्यको घट’नाले अहिले धेरैको ध्यान तानेको छ । कमलासगँ सम्बन्धि थुप्रैले त्यसबारे आफ्ना कुरा राखेका छन । उनिहरु मध्ये केहिका कुरा मेल खाएता पनि कतिपयका कुराहरु भने पत्याउन नसकिने खालका पनि छन । साथै अस्पता’लमा कमलाले आफ्नी आन्टिसगँ भएको कुरा पनि पत्याउन नसकिने खालको रहेको धेरैले भन्दै आएका छन । घट’ना भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि यथार्थ भने बाहिर आउन सकेको छैन ।
यस घट’नालाई प्रह’रीले अनुस’न्धान गरिरहेको छ । यसै बिच कमलाको घट’नाको बारेमा अनु’सन्धान गरेका दुई जना सामाजिक कार्य गर्दै आएका ब्याक्ती अहिले मिडियामा आएका छन । उनिहरुले फेरि अर्को र’हस्य खोलेक छन । घ’टना बाहिर आउने बित्तिकै देखि आफुहरुले यश घ’टनाबारे बुझी रहेको र खोजी गरिरहेको उनिहरुले बताएका छन । त्यस क्रममा सबैको बयान सुनेर आफुहरुले अनु’सन्धान गरिरहेको उनिहरुको भनाई छ । शनिबार आफ्नो ओ.जे.टि सकेर हराएकी कमला सोमबार जंग’लमा भेटिएकी थिइन ।
आफू शनिबार देखि नै यहि जं’गल’मा बसेको भनी कमलाले भनेको भनी कुरा बाहिर आए पनि त्यो झुटो भएको उनिहरुले बताए । कमला बिराटचौकबाट शनिबार बसमा पथरी आसपास आएको र त्यहिको होटलमा बसेको उनिहरुले बताएका छन । कमला बसबाट जं’गल तिरै ओर्लिएको र त्यहाँबाट उनलाई तिनै ह’त्या गर्नेहरुले होटल लिएर गएको आफुहरुले बुझेको उनिहरुको भनाई छ । कमलाकी साथी र उनलाई ओ.जे.टि गराउने शिक्षकले भने अनुसार कमला म्यासेजमा निकै ब्यस्त हुने गरेकी थिइन् ।
कमला फोनमा नबोलेता पनि म्यासेन्जरमा कोहि ब्याक्तिसगँ कुरा गर्ने गरेको ती ब्याक्तिहरुले बताए । अहिले उनको फोनबाट सबै कुरा डिलिट भएकोले यो यो’जना’बद्ध तरिकाले भएको उनिहरुको दाबी छ । होटलमा नै उनलाई औ’सधि खुवा’उदा होटलमा को आयो को गयो भन्ने रेकर्ड रहने हुनाले प’क्राउ पर्ने ड’रले उनलाई जंग’लमा लगेर औ’सधि खु’वाइएको उनिहरुले बताएका छन । केही समय भित्रमा नै ह’त्यारा बाहिर आउने उनिहरुको भनाई छ । कमलाको प्रेमी भएको र उसैले यो सब गरेको उनिहरुले दाबी गरे ।
कमला दुई रात पथरिको होटलमा अन्य ब्याक्ती सगै बसेको उनिहरुको भनाई छ । आफुहरुले उक्त होटल पनि पत्ता लगाई सकेको तर यथेष्ट प्रमाण नभएको उनिहरुले बताए । आफुहरु अहिले प्रमाण जुटाइरहेको हुनाले केही दिनमा नै सार्वजनिक हुने पनि बताए । साथै कमलाको साथमा अरु केही ब्याक्ती भनी भएको उनिहरुले बताए । ती ब्याक्तिहरुको पहिचान आफुहरुले गरिसकेको हुनाले अन्य प्रमाण जुटाएर प्रहरीको रोहबरमा केही दिन भित्रमा नै अप’राधीलाई सार्वजनिक गरिने उनिहरुले बताएका छन । (भिडियो हेर्नुस)
Last Updated on: January 5th, 2022 at 3:33 pm